सन्तानले छाडेपछि आश्रमको भरोसामा वृद्धवृद्धा – Etajakhabar
सन्तानले छाडेपछि आश्रमको भरोसामा वृद्धवृद्धा
काठमाडौँ, १५ माघ । जिन्दगीको उत्तरार्धमा सन्तान आफ्नै साथमा रहूँन भन्ने कुन आमाको चाहना हुँदैन र ! आफ्नो ज्यान आफैंलाई भारी भएर घुँडाले बूढो शरीर धान्न नसकेको बेला घर, परिवार, छोराछोरी र आफन्तजनको सहारा हरेक वृद्धवृद्धाले खोज्छन् र यो स्वाभाविक हो ।
सन्तान भएर पनि बूढेसकालमा एक्लो जिन्दगी जिउनु पर्दा साह्रै विरक्त लाग्दो रहेछ मानव सेवा आश्रममा आश्रय लिइरहेकी ९० वर्षीया रमा थापालाई । बाबुको मृत्युपछि दुई भाइ छोराले भएको सबै सम्पत्ति कुम्ल्याए र आमालाई सडकमा बेवारिसे छाडे । बूढेसकालमा आफ्नै छोराको आँखाको कसिङ्गर भएपछि उनी आश्रमको आड लागेको पनि आज सात महिना बितिसक्यो । अहिलेसम्म कुनै आफन्त पनि खोज्न आएका छैनन् ।
वृद्धाश्रममा बस्ने अधिकांश वृद्धवृद्धामध्ये धेरैका छोराबुहारी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायतलगायतका मुलुकमा राम्रै पेशा व्यवसाय गर्छन् । कतिपय त राजनीतिक दलका नेता तथा व्यापारीसमेत छन् । तर पनि आफ्ना आमाबाबुलाई वृद्धाश्रममा लगेर थन्काएका छन् । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका महासचिव छत्रबहादुर प्रधानले सम्पत्तिका कारण वृद्धवृद्धा बूढेसकालमा आफ्ना सन्तानबाट एक्लिनु परेको तर्क गर्छिन् । नयाँ पुस्तामा देखिएको व्यक्तिवादी सोचसँगै मौलाएको एकल परिवार (श्रीमान्, श्रीमती, छोरा/छोरी) को संरचनाभित्र जन्मदाता बाबुआमा नअटाएको देखिन्छ ।
महासंघले पटकपटक अनुनयविनय गर्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकको समस्या सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको महासचिव प्रधानको गुनासो छ । ज्येष्ठ नागरिक अधिकारकर्मी सीताराम ढकाल ज्येष्ठ नागरिकले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र अनुभवको सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् ।
अग्रज समाजका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुली बजार भाउ र महँगीलाई ध्यानमा राखेर ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै भएको वृद्धाभत्ता कम्तीमा पाँच हजार पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । वि.सं. २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले १०० बाट शुरु गरेको वृद्धभत्ता अहिले दुई हजार पुगेको छ ।
विसं २०३३ मा पशुपति पञ्चदेवल समाज कल्याण केन्द्र (हालको पशुपति वृद्धाश्रम) स्थापना गर्न नहुने टिप्पणी त्यतिखेर गरिए पनि अहिले देशैभरि करिब ८० वृद्धाश्रम रहेका छन् । पछिल्लो समयमा संयुक्त परिवारभन्दा पनि एकल परिवारको संस्कृति मौलाउन पुग्दा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी गरिएको संवैधानिक व्यवस्था जतिसक्दो चाँडो ऐन/कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १५, २०७४ समय: १७:०३:३१
साढे दुई दशकसम्म डा देवकोटाकी भान्छे रहेकी कान्छीमायाले भक्कानिँदै भनिन्– मलाई आमासरह मान्थे, अब देख्न पाउँदिन भनेर आजै मैले उहाँलाई २/३ पल्ट हेरेँ’